China Low Latency Gaming Mode Touch Control RGB ọkụ Dual ọkwọ ụgbọala na-akwado Ezi Ikuku Earbuds Earphone Manufacture and Factory | Yong Fang
Low Latency Gaming Mode Touch Control RGB ọkụ Dual ọkwọ ụgbọala na-akwado Ezi Ikuku Earbuds Earphone
Ngwọta Bluetooth: ATS3015 V5.0
Li-batrị ikike: 3.7V, 30 mAh
Aha ngwaahịa ： T26
Ike nchịkọta: 15mW
Oge nkwụ ụgwọ maka ntị abụọ: oge ​​5
Amazing Bass Dual Neodymium 6mm Driver】 Ọ dị mfe ịchọta abụọ iberibe
Gold agba elu àgwà ọkwọ ụgbọala si uzo n'ihu ụlọ nke a TWS
mkpọchi. Ezubere nke a maka ahụmịhe egwuregwu kachasị egwu na ige egwu
Na Low Latency Ikuku Modegba Cha Cha Mode】Emere ya na ATS 3015
elu mma wireless Bluetooth chipset, e mere na ma gaminggba Cha Cha mode na
nkịtị mode. Cha Cha mode na-professionally mere maka ngwa ngwa mgbasa na
ebumnuche ịgba nkịtị dị ala. Emebere usoro kwesiri ekwenti maka okwu ekwentị,
ige egwu, na nkwukọrịta ntanetị ndị ọzọ na ntanetị site na ngwaọrụ
Bluetooth. Twodị abụọ ahụ nwere ike gbanwee site na ibe ha site na aka;
RGB Ìhè Na Batrị Case & Earpieces】Ejiri eriri RGB mebe ntị ahụ ma ahaziri ya maka akara ahaziri ya na ọkụ. Na batrị batrị, akụkụ ọ bụla ejiri ọkụ RGB mepụta yana mgbe ị meghere batrị ma ọ bụ kwụọ batrị n'ime batrị ahụ, ọkụ RGB ga-agbanye na akpaghị aka. Na, maka ọkụ RGB, enwere ike ịhazi ya dabere na ihe achọrọ maka ọrụ ọ bụla maka ịme ngwaahịa a na ndịiche dị iche iche;
【Ergonomic Designlọ Nchepụta Maka Uche Pụrụ Iche】Ọ bụ ezie na a na ntị ntị e mere na 2 iberibe ọkwọ ụgbọala na ha dayameta, 6mm, anyị engineering otu ọma polished ụlọ engineering iji hụ ogologo oge yi mma na earbuds ọdụ n'ime ntị anụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-achọpụta nke a dabere na arụmọrụ dị elu dị elu, kwa.
Batrị 50mAh Maka Earpieces & 500 mAh Batrị Maka Okwu Batrị】N'ime ụlọ, enwere batrị 50mAh n'ime ụlọ ọ bụla, na ikike batrị n'ime ikpe ahụ bụ 500mAh. Na batrị zuru ezu, ntị ntị nwere ike ịrụ ọrụ 6 awa. Na, okwu batrị nwere ike ịgba ekwentị ntị maka ugboro atọ ọzọ. Na ihe niile, site na nkwado ike site na ikpe ahụ, ntị ntị a nwere ike ịrụ ọrụ elekere 18 karịa. Na, batrị na-akwụ ụgwọ batrị bụ USB C.
Nke gara aga: Factorylọ ọrụ mbụ Tws Earphone & Headphone Sports Headset Running Fitness Wireless Earbuds T18
Osote: USB C Nchaji E mepụtara Ọsọ Ahịa Egwuregwu Na-enweghị Igweisi Bluetooth Ikuku
OEM Omenala Logo Dual Driver Wired Gaming headse ...
OA Asambodo TWS Ikuku Auriculares Blueto ...
Kacha ọhụrụ zuru ụwa ọnụ version sọrọ ike ịkwọ ụgbọala Touch ...
Online Retail Stores Hands Free Tws Stereo Heads ...